SingForYou.net - Thet Htar
By : myobala on Jan 3, 2010
Score: 95 Rating: 5.00 Comments: 41
Thet Htar's Description
maybell on Nov 20, 2010 0
lovestriker on Sep 6, 2010 0
kohtwe49 on Jun 15, 2010 0
u4gyi on Jan 6, 2010 0
KO Bala Gyi yay...good del byar....... de lo lote san ber btar.. comment pwint pay lite ber byar...Good lo good der comm; pay chin der tg ... vote lo ma ya .. comm lo ma ya nel byar...gayu site ma nay nel Ko Bala yay... de lo song myo nel lite del :D.. *****voted4you ko bala..
wow နားထောင်လို့ကောင်းမှကောင်း bro ရေ။ Clap Clap Clap. ************************
aungtun1 on Jan 5, 2010 0
wow,, that's really nice, bro,,, so hter tar shel pal,,,ayann kaung tal bro yay,, another Perfect song choice, brother*************
myobala on Jan 5, 2010 0
thanks ever so much my little bro;.......
Bila yay fri..bar twey pit nay lae? I always support you..like your vocal alot:D*****
bala yay......sate htal mhar bar mha htar ma nay nae......pyaw chin lo sa tar phyit mhar par......so myal so.....athan aye aye nae narr htaung lo kg tal....******
winwinthant on Jan 4, 2010 0
ကောင်းလိုက်တာအကိုရေ....ဗုတ်ပေးချင်လို့ကိုဝင်ခဲ့ပြီ သီချင်းလေးကညိမ့်ညိမ့်လေးနဲ့ အသံကအေးအေးနဲ့နားထောင်လို့ကောင်းမှကောင်း **********************************
liontun on Jan 4, 2010 0
a khu kya ma pal 5*************pay loz ya tot tal bro yay. so htar tar ko nar sin arr pay thwar par tal :)))
Ilovemusic on Jan 3, 2010 0
good shal gyi bel....arr gyi kg tel wayy....arr ya par ya ..listen pe...arr ya par ya...5* ko....pyin pyin lay ...nate pe...arr pay twar tel..hek hek..bravoooooo..:atb.
thetnyein on Jan 3, 2010 0
ကိုကြီးမျိုးရေ...သက်ထားကိုလွမ်းနေသလား... ရွာပြန်ရင်...ပြောလိုက်မယ်လေဗျာ..နော...အဟဲ မိုက်တယ်ဗျာ....ဒို့ကိုကြီးကတော့......။
forevermoe on Jan 3, 2010 0
ko g myoooooooooo...khu tot pay vote p pop layy ..ae lo ma vote ya yin ta myo gyi pae ta khu khu lo nay ta lo ..gyii..khu lo so tot aarr ya parr ya arr pay lo ya pp pop...ko g myo yal ..ko g so htar tarrayan kg tal ..sis pann shwe lay pyaw ta lo ..a yan like tal ..ko g ..ta khar mha ma kyar buu lo pae norr ...khu so htar tarrayan like tal..thet htarr taee ..heeee..:P *****************************for ko g myooo..:D
turikimuriki on Jan 3, 2010 0
woww... it 's back... bro gyi ka comment & vote kwint par lite tar kg par tel... :))))) .... really nice par nor... bar so so par...amyae arr pay nay par tel.... 5*4u always .....
big thanks my baby sister..
panshwe on Jan 3, 2010 0
ဒါမျိုးသီချင်းမျိုးတွေနဲ့ တအားလိုက်တာပဲ .. မိန်းကလေး သီချင်းတွေထက်စာရင် .. အဟီး .. အားပေးသွားပါတယ် အစ်ကိုကြီးရေ .. ~ သက်ထားရယ် မင်းပြောခဲ့တာပဲ ~~ **********************
ညီမငယ် မပန်းရွှေလေးရေ.....ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်.......`~ ပန်းရွှေလေးရေ...မင်းပြောခဲ့တာပဲ...~~~~
ngenge09 on Jan 3, 2010 0
း) ခုလို့ပြန်ဖွင့်လိုက်တာကောင်းတယ်အစ်ကို။ ကိုယ်ဆိုထားတာကို သူများပြန်ဝေဖန်အမှတ်ပေးသွားတာကိုကြည့်ရတာလည်း ပီတီတစ်မျိုးပဲ ပာုတ်ဘူးလား (လူကြီးကိုဆရာလုပ်နေပြန်ပါပြီ :P) ဒီသီချင်းလေးကိုခုနပဲဖွင့်နားထောင်ကြည့်နေတာ အစ်ကိုကအရင်ဆိုလိုက်တာကိုး တော်တဲ့သူအရင်ဆိုတော့ ပြောစရာကိုရှိဘူး အေးအေးလေးနဲ့ ဂွတ်တယ်ရှယ်ပဲ *****
myobala on Jan 3, 2010 0
ညီမငယ်လေး နော်လေးရေ.....အကိုက အပြု သဘော ဆောင်တဲ့ဝေဖန်တာဆို သဘောကျပါတယ်.......အကိုဆိုတာ ကောင်းကောင်း မကောင်းကောင်းမြှောက်သာပေး....ကောင်းတယ်လို့...ဟိဟိဟိ...ညီမငယ်လေး အခုလို မြှောက်ပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပါနော်.....
achitsonethu on Jan 3, 2010 0
ဝေးးး ကွန့်မန့်လက်ခံပီဂျ ဆိုသွားတာအရမ်းကောင်းပါတယ်ချင့်
သမီးလေးခြူးရေ....ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွယ်...တခါ တခါ ကျတော့ ကိုယ့်ဖာသာ အေးဆေးနေတာကို လာလာခေါင်းစားနေကြလို့ပါ....ဦးဦးက အားလုံးကိုခင်တတ်ပေမယ့် ခေါင်းစားတာတော့ မကြိုက်ဘူးလေ.....ဒါကြောင့် လူပျိုကြီးဖြစ်နေတာ....(ဆိုင်လား မဆိုင်လားတော့တိဝူး....ကြုံ တုန်းကြော်ငြာဝင်လိုက်တာ....ဟိဟိဟိ)
khaki on Jan 3, 2010 0
bro ..yayayan ko mike tal byar......thet htar tae lar..bro yay...dar ko ma ma thet htar pop naw...he he
SKB on Jan 3, 2010 0
ကိုမျိုးဗလ ရေ အားပေးသွားတယ်နော့ ဆိုထားတာကောင်းမှကောင်းပဲ
YinLiHoe on Jan 3, 2010 0
Ko Bala Gyi .. Are you kidding us? Pay vote Like .. Ma Pay vote Like Nae.. HeeHeee.... Kg Bar Tel.. Maung Tet Htar Yel.. I really like this song. Thank you for singing this song. I will try later .. **********
ချစ်ကိုကြီးရေ.....အဲလို မဟုတ်ရပါဘူးဗျာ.....တချို့ ကကျွန်တော်သီချင်းမှာတမင် သက် သက် လိုက်ပြီးစိတ်ညစ်အောင်လုပ်နေကြလို့ပါ.....ကျွန်တော်က စိတ်ညစ်မခံချင်လို့ဗျ......နားလည်ပေးနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်နော်.....ကျေးဇူးပါဗျာ....
romeo on Jan 3, 2010 0
good 1 ko myobala gyi yay...nice 1 nice 1...clap clap clap.......
thanks ever so very much mate,romeo...
deathbloodydeath on Jan 3, 2010 0
Great man!!! Love the song, love your singing!!! **********************
big thanks mr.deathbloodydeath....